Insurance Licenses Awarded to Foreign, Joint-venture Companies | Myanmar Business Today
Home Business Local Insurance Licenses Awarded to Foreign, Joint-venture Companies
The Ministry of Planning and Finance granted insurance licenses to five foreign-owned life insurers, three joint-venture life insurance companies and three joint-venture general insurance companies ataNovember 28 ceremony in Naypyidaw.
The decision to awardalicense to these companies was based on their completion of the prerequisite process for operating insurance businesses, according to the ministry.
Myanmar started opening up its insurance industry in 2013. In January, the government announced that it would allow foreign companies to enter the local insurance market. Foreign entities are allowed to own up to 35 percent of shares in insurance joint ventures.
Currently, 13 foreign insurance companies have opened representative offices in Myanmar. Most of them are from Japan and the rest are from China, Singapore and India. In addition to Myanma Insurance, there are 12 other local insurers.
Despite the country’s small insurance penetration rate, an IKBZ survey estimates that Myanmar’s insurance market will grow to K1.75 trillion by next year and K4 trillion over the next 10 years.
Health and life insurance are the most popular insurance types in Myanmar, where only two million people out ofa53 million population have insurance. Experts say that if insurance companies can strengthen the market, the local insurance industry will grow to its full potential.
Economic growth reports often indicate that allowing foreign insurance companies, banks and wholesale businesses into the domestic market will promote foreign investments in Myanmar.
The five foreign-owned companies awardedalife insurance license are AIA Myanmar Life Insurance, Chubb Life Insurance Myanmar, Dai-ichi Life Insurance Myanmar, Manulife Myanmar Life Insurance and Prudential Myanmar Life Insurance. The three joint-venture companies grantedalife insurance license are CB Life Insurance, Capital Taiyo Life Insurance and Grand Guardian Nippon Life Insurance.
The three joint-venture companies awardedageneral insurance license are AYA SOMPO Insurance, Grand Guardian Tokio Marine General Insurance and KBZ MS General Insurance.
နိုင်ငံခြားသားရာနှုန်းပြည့် ပိုင်ဆိုင်သည့် အသက်အာမခံကုမ္ပဏီ (၅) ခု ၊ ဖက်စပ်လုပ်ငန်းများအဖြစ် အသက်အာမခံကုမ္ပဏီ (၃) ခုနှင့် အထွေထွေအာမခံကုမ္ပဏီ (၃) ခုတို့ကို နိုဝင်ဘာ (၂၈) ရက်တွင် နေပြည်တော်၊ သင်္ဂဟဟိုတယ်တွင် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် လိုင်စင်ကို အခမ်းအနားဖြင့် ပေးအပ်ခဲ့သည်။
ပြည်တွင်းအထွေထွေအာမခံကုမ္ပဏီများနှင့် နိုင်ငံခြားအာမခံကုမ္ပဏီများကို သတ်မှတ်ထားသည့် လိုင်စင်အကြိုလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် လုပ်ငန်းစတင်ချိန်တွင် ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည့်အချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပြီး ယင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ပြီးစီး၍ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်ချပေးခြင်း ဖြစ်ကြောင်း စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။
ပြည်တွင်းအာမခံကုမ္ပဏီများကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှ စတင်၍ အာမခံလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးခဲ့ပြီးနောက် နိုင်ငံခြားအာမခံကုမ္ပဏီများကို ယခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးမည့်အကြောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရသည့် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများသည် ပြည်တွင်းအာမခံကုမ္ပဏီများ၌ ရှယ်ယာအများဆုံး ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခွင့်ပြုထားသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် ပြည်တွင်း၌ နိုင်ငံခြားအာမခံကိုယ်စားလှယ်ရုံးခွဲ ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ကုမ္ပဏီပေါင်း ၁၃ ခုရှိကာ ဂျပန်ကုမ္ပဏီများအများဆုံးပါဝင်ပြီး တရုတ်၊စင်ကာပူနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ကုမ္ပဏီအချို့လည်းပါဝင်သည်။ အစိုးရလုပ်ကိုင်လျက်ရှိသော မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းအပြင် ပြည်တွင်းအာမခံကုမ္ပဏီ ၁၂ ခုက လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။
လက်ရှိတွင် အာမခံထားရန် စိတ်ဝင်စားမှုနည်းသော်လည်း လာမည့် တစ်နှစ်အတွင်းတွင် အာမခံထားရှိငွေ ကျပ် ဘီလီယံ ၁၇၅၀ အထိ ရှိလာနိုင်ပြီး ဆယ်နှစ်အတွင်းတွင် ကျပ် ဘီလီယံ ၄၀၀၀ အထိ မြန်မာအာမခံဈေးကွက် ကြီးထွားလာမည်ဖြစ်ကြောင်း IKBZ ၏ စစ်တမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
လက်ရှိတွင် အာမခံဈေးကွက်၌ ကျန်းမာရေးအာမခံနှင့် အသက်အာမခံအမျိုးအစားကို အာမခံထားမှုအများဆုံး ဖြစ်ပြီး လူဦးရေ ၅၃ သန်း ကျော်ရှိသော မြန်မာနိုင်ငံတွင် အာမခံထားရှိသူ နှစ်သန်းခန့်သာရှိသည်။ ဈေးကွက်ကို ယခုထက်ပိုမိုချဲ့နိုင်ပါက လာမည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း အာမခံလုပ်ငန်းမှာအားကောင်းလာနိုင်မည့်အကြောင်း ကျွမ်းကျင်သူများက ဆိုကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်သည့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာများတွင်လည်း အစိုးရအနေဖြင့် အာမခံလုပ်ငန်း၊ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်လက်လီလက်ကားလုပ်ငန်းများတွင် ပြည်ပကုမ္ပဏီများကို လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးခြင်းက နိုင်ငံ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကို အားပေးရာရောက်ကြောင်း ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။
နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက်က လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးလိုက်သည့် ရာခိုင်နှုန်းပြည့်ပိုင်ဆိုင်သည့် နိုင်ငံခြားအသက်အာမခံကုမ္ပဏီ (၅)ခုမှာ AIA Myanmar Life Insurance ၊ Chubb Life Insurance Myanmar ၊ DAI-ICHI LIFE INSURANCE MYANMAR LTD ၊ MANULIFE MYANMAR LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED နှင့် PRUDENTIAL MYANMAR LIFE INSURANCE LIMITED တို့ ဖြစ်သည်။
ဖက်စပ်အသက်အာမခံကုမ္ပဏီ (၃) ခုမှာ CB Life Insurance Co.,Ltd ၊ Capital Taiyo Life Insurance Limited, Granc Guardian Nippon Life Insurance Co.,ltd တို့ဖြစ်သည်။
Previous articleYoma Car Share Expands to 25 Rental Hubs
Next articleThe Worst Tech Gifts We Give (and How to Do Better)